Maxay tahay sababta loo xiray jidadka Muqdisho? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxay tahay sababta loo xiray jidadka Muqdisho?
Farmaajo ayaa looga digay inuu dalka geliyo dagaal sokeeye, hadii uusan ka waantoobin ficiladda xun iyo daandaansiga colaadeed.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa saaka xiray inta badan waddooyinka magaalada Muqdisho, waxaana la joojiyay dhamaad gaadiidkii shaqeyn jiray, taasoo ku qasabtay shacabka inay lugta maalaan.
Xirnaashaha jidadka ay si weyn u saameysay dadka shacabka ah iyo ganacsigii ku yaalla hareeraha wadooyinka la xiray.
Wararka ayaa sheegaya in sababta loo xiray waddooyinka ay tahay in maanta uu dhaci rabay dibad-bax lagu taageerayo dowladda Federaalka Soomaaliya, sidoo kalena laga cabsi qabay in la qabto mid kale oo looga soo horjeedo Farmaajo ay mucaaradka qabtaan.
Xisbiga Wadajir ayaa u xusaya sanad guuradii 3aad ee xasuuqii loo geystay